Ngathi | Shijiazhuang Abanyanisekileyo Chemicals Co., Ltd.
Shijiazhuang Abanyanisekileyo Chemicals Co., Ltd. yasekwa ngo-2001, imveliso ephambili Le nkampani zezi: Hexamethylphosphoric triamide, Formamide, N, N, N, N'-Tetramethylethylenediamine, Dichlorodiethylether, 4-Methylmorpholine, 3,5-Dimethylpiperdine, 1,2 -diaminobenzene, ABL, njl, iimveliso zethu zithunyelwa eYurophu, mpuma Asia, Korea, Japan, Taiwan kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Iimveliso zisetyenziswa kakhulu kwi-elektroniki, amayeza, amayeza okubulala izitshabalalisi, iziyobisi, idayi, unyango lwamanzi, izinto zokwenziwa kunye nezinye iinkalo.
Ukusukela oko yasekwa, inkampani ihlala ihambelana nomgaqo wophuhliso "wokuthembeka, uzinzo, uphuhliso kunye nokucokiswa", kwaye igcine intsebenziswano yexesha elide kunye nozinzo okanye izabelo kwimizi mveliso enamandla kunye namaziko ophando ephondo ukuqinisekisa uzinzo lomgangatho weemveliso kunye nexabiso inzuzo, ngakumbi Kukuqinisekisa ukuphuhliswa kunye nokuveliswa kweemveliso ezintsha, kwaye ngoku sele iseke ubuchwephesha bobuchwephesha kwishishini lokubonelela ngezixhobo, ishishini kunye neemanyano zabasebenzi kunye norhwebo lwasekhaya nakwamanye amazwe.
Kwiminyaka yakutshanje, inkampani inikwe isihloko esithi "Ingqibelelo yeShishini eliPhucukileyo loShishino" okanye "Ishishini eliseMgangathweni ngokuSebenza" elikhutshwe yinqanaba likazwelonke okanye lephondo okanye imibutho; Kuye kwanconywa kwaye kwacetyiswa yiAlibaba, iBaidu, iNethiwekhi yeHC kunye nezinye iinkampani zenethiwekhi; Ngokukodwa Ndifumene udliwanondlebe olukhethekileyo kunye nokwaziswa kwenkampani "yeBrand Power" kwikholamu yeCCTV Securities Information Channel.
Ukunyaniseka sisiseko sophuhliso lweshishini, kwaye izinto ezintsha zingamandla okuqhuba kophuhliso lweshishini. Sisoloko sibeka ingqibelelo kwindawo yokuqala, kwaye kukusukela kwethu ukubonelela abathengi ngeemveliso ezonelisayo. Ndiyakholelwa ukuba ngemizamo yethu engagungqiyo, ngokuqinisekileyo siya kwenza inkqubela phambili, siphumelele ukuthembela kwabathengi abaninzi, kwaye senze inkampani yethu iqhubeke nokukhula kunye nokuphuhlisa.
Nokuba yeyokuthengisa ngaphambili okanye emva kwentengiso, siya kukubonelela ngeyona nkonzo ibalaseleyo ukukwazisa kwaye usebenzise iimveliso zethu ngokukhawuleza.
- Shijiazhuang Onyanisekileyo Imichiza Co., Ltd.